Tag: iibsiga safarka | Martech Zone
Tag: iibsiga safarka
In kasta oo suuqleydu ay inta badan ka shaqeeyaan soo saarista waxyaabo labadaba ka duwan oo sharraxaya faa'iidooyinka wax soo saarkooda iyo adeegyadooda, haddana waxay inta badan seegi doonaan sumadda soo saarista waxyaabaha nooc kasta oo qof ah oo iibsanaya alaabtooda ama adeeggooda. Tusaale ahaan, haddii rajadaadu ay raadineyso adeeg cusub oo martigelin ah, suuq-geyn ku wajahan raadinta iyo beddelaadyada ayaa diiradda lagu saari karaa waxqabadka halka agaasimaha IT-ga uu diiradda saari karo astaamaha amniga. Waa
Way adag tahay in la aamino in emaylku jiray muddo 45 sano ah. Inta badan suuqleyda maanta waligood kuma noolaan adduun la’aan email la’aan. Hase yeeshe inkasta oo lagu xardhay dharka nolol maalmeedka iyo ganacsiga dad badan oo naga mid ah muddo aad u dheer, haddana khibradda adeegsadaha iimaylka ayaa is beddelay wax yar tan iyo markii farriintii u horreysay la soo diray 1971. Hubaal, hadda waxaan ku heli karnaa emayl qalabyo badan, qurux badan wakhti kasta meel kasta, laakiin habka aasaasiga ah